एमसीसीले गर्दा सत्ता गठबन्धन टुटदै, ओली-देउवाको नयाँ सरकार बनाउदै, को प्रधानमन्त्री ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमसीसीले गर्दा सत्ता गठबन्धन टुटदै, ओली-देउवाको नयाँ सरकार बनाउदै, को प्रधानमन्त्री ?
अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्था विकास हुँदै गएको छ । गठबन्धनभित्र एमसीसीका कारण फाटो बढ्दै गएको छ । यसले कुनैपनि बेला गठबन्धन दुर्घटनातर्फ बढेको छ ।
एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् । उनले एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँगको भेटमा पनि पारित गर्ने वचन दिएका छन् । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरिरहेको प्रष्ट पारेको बुझिएको छ ।